Aquamarine - ụdị beryl na-acha anụnụ anụnụ na-ejikarị ọla edo ọla edo - vidiyo
Nkume Aquamarine bu acha anụnụ anụnụ nke ụdị beryl na-ejikarị dị ka gemstone na ọla ịchọ mma: mgbaaka njikọ aka, mgbaaka, ọla ntị na mgbaaka…
Ọ na - abụkarị n'ọtụtụ mpaghara nke na - amụnye beryl nkịtị. Mkpokọta graper plasta nke Sri Lanka nwere aquamarine. Chrysolite aquamarine bụ nkume-acha odo odo na-acha odo odo, na-eme na Brazil. Maxixe bụ ụdị aquamarine dị acha anụnụ anụnụ, nke a na-ahụkarị na mba Madagascar. Agba ya na-achazi ọcha mgbe anwụ na-acha. O nwekwara ike iwepu n'ihi ọgwụgwọ okpomọkụ. Colorcha nwere ike ịlaghachi site na eriri irradiation.
Ejiri acha odo odo na-acha anụnụ anụnụ nke aquamarine na-ekwu na Fe2 +. Fe3 + ion mepụtara agba na-acha odo odo, na mgbe Fe2 + na Fe3 + dị. Agba bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị karịa ka ọ dị na maxixe. Idozi maxixe site n'ìhè ma ọ bụ ikpo ọkụ otu a nwere ike ịbụ n'ihi mbufe ebufere n'etiti Fe3 + na Fe2 +. Enwere ike imepụta agba maxixe gbara ọchịchịrị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha odo odo ma ọ bụ odo beryl site n'iji ụmụ irighiri mmiri na-acha ya. Gamma ụzarị, nwekwara neutrons ma ọ bụ ọbụna X-ray.
Ngwakọta kemịkal nke Beryl bụ beryllium aluminom cyclosilicate na usoro kemịkalụ Be3Al2 (SiO3) 6. N'otu aka ahụ, ụdị beryl ndị a ma ama gụnyere emerald, nakwa aquamarine, heliodor, na morganite. Dị ka ọ na-eme, kristal ọla edo nke beryl nwere ike ịdị elu ruo ọtụtụ mita. Kristal a kwụsịrị na-adịtụ obere. Nkume dị ọcha enweghị ntụpọ, ụcha na-adabere na ya. Ụcha nwere ike ịcha acha, acha anụnụ anụnụ, odo, ọbara uhie (ọcha), na-acha ọcha. Ọ bụkwa ụbụrụ beryllium.
Beryl bụ usoro ikuku nke hexagonal. Ọ bụ nke a na-emepụta ogidi hexagonal mana o nwekwara ike ime na oke àgwà. Dị ka cyclosilicate ọ na-agụnye ihe mgbanaka nke silicate tetrahedra na-haziri na ogidi n'akụkụ C axis na dị ka larịị yiri perpendicular na C axis, na-eme ka ọwa tinyere C axis. Ọwa ndị a na-ejikọta ọtụtụ ions, mkpụrụ ndụ na-anọpụ iche, na mkpụrụ ndụ n'ime kristal. N'ihi ya, ọ na-emeghasị njedebe nke kristal na-ekwe ka ndị ọzọ gbanwere na Aluminom, Silicon, na Beryllium na saịtị ndị dị na crystal. Ụdị dịgasị iche iche na-abịa site n'adịghị mma. Ịbawanye ọdịnaya dị n'ime alkali na silica na-eme ka ụba na ụda ntụgharị na birefringence bawanye.
Aquamarine pụtara na akụrụngwa
Aquamarine bụ nkume obi ike. Ike ya na-eme ka ahụ ghara ịdị ala ma mee ka uche ya dajụọ. Aquamarine nwere mmekọrịta n'etiti ndị mmadụ na-eme ihe. O nwere ike ime ka nnabata ndi ozo juru gi ma juo ikpe, ma kwado ndi n’enye nsogbu.
Nkume omumu Aquamarine
Aquamarine, ụbọchị ọmụmụ nke March, nwere ọmarịcha agba ma bụrụla ihe nnọchi anya nke ntorobịa, ahụike na olile anya. Agba ya na-acha ọcha na-acha site na -acha nchara gaa na nke na-acha anụnụ anụnụ ma na-echefu oke osimiri.
Anyị na-eme ọla edo omenala aquamarine dịka mgbanaka njikọ aka, olu olu, ọla ntị, mgbaaka…
ịzụta aquamarine mmiri na ụlọ ahịa anyị
Tags Aquamarine, sịntetik